Kedu ka ụgbọ Noa dị ka ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Olee otú ụgbọ Noa dị. Ụgbọ Noa bụ ụgbọ mmiri buru ibu nke e ji osisi cypress kpụọ ma jiri ụrọ mee. Ụgbọ ahụ nwere ike ibu ibu buru ibu ma jee ozi iji zọpụta ezinụlọ Noa na ụdị anụmanụ ọ bụla pụọ ​​n’Iju Mmiri ahụ. Ọ bụ Chineke nyere Noa ntụziaka otú e si arụ ụgbọ ahụ.
N'ihi ajọ omume nke mmadụ. Chineke kpebiri ibibi ihe ndị o kere. Ma e nwere otu ezi mmadụ nke na-atụ egwu Chineke: Noa. Ya mere, Chineke nyere ụmụ mmadụ ohere maka nzọpụta. Ọ gwara Noa ka ọ rụọ ụgbọ.
Ugbu a, anyị ga-atụle otú ụgbọ Noa si dị:
1 Olee otú ụgbọ Noa si dị ka Baịbụl si kwuo
2 Ebee ka ụgbọ ahụ dị taa?
Olee otú ụgbọ Noa si dị ka Baịbụl si kwuo
Igbe ahụ ga-abụrịrị nnukwu ụgbọ mmiri na-enweghị atụ. Anyị ga-eburu n'uche na o kwesịrị inwe ohere iji biri ụdị anụmanụ ole na ole na mgbakwunye na ezinụlọ Noa. ya mere, Chineke nyere ya ntụziaka ndị dị mkpa. Nha ya bụ:
Ogologo ya dị kubit 300 (ihe dị ka mita 135).
Cubit 50 n'obosara (ihe dịka mita iri abụọ na abụọ).
Cubit 30 n'ịdị elu (ihe dịka mita 13,5).
El ikiaka bụ nha oge ochie nke dabara na ya 45 sentimita.
Chineke gwara Noa ka o wuo ụgbọ ahụ osisi de cypress were kpuchie ya pitch maka n'ime na n'èzí ka ọ ghara ime mmiri. Igbe ahụ nwere a ọnụ ụzọ akụkụ na ala atọ, iji nọrọ n'ụlọ ọtụtụ anụmanụ dị iche iche. E wezụga ịrụ ụgbọ ahụ, Noa aghaghị ịrụ ya na-echekwa ụdị nri niile maka njem ahụ. Ọrụ a were ihe dị ka otu narị afọ.
Mere onwe-gi ub ofọ nke gofer osisi; ime-ulo di iche ub inọ ahu, i g makeme kwa ya pua na azu.
Otu a ka ị ga-esi mee ya: ogologo ụgbọ ahụ ga-adị narị kubit atọ, obosara ya dị kubit iri ise, na kubit iri atọ n'ịdị elu.
Ga-eme ụgbọ mmiri ahụ ụgbọ ahụ, ị ​​ga-arụcha ya n’otu kubit nke ibuli n’elu; i g puttiye kwa ọnu-uzọ ub arkọ ahu n'akuku ya; ị ga-emekwa ya ala ala, nke abụọ na nke atọ.
Jenesis 6: 14-16
Mgbe ụbọchị Iju Mmiri ahụ bịara, Chineke zigara ụdị anụmanụ dị iche iche ụzọ abụọ ka ha bata n’ụgbọ ahụ. Na mgbakwunye na anụmanụ ndị ahụ, ngụkọta mmadụ asatọ banyere n'ụgbọ ahụ: Noa, nwunye ya, ụmụ ha atọ, na ndị nwunye ụmụ ha. Ọ dịghị onye ọzọ nwara ịbanye. Mgbe ahụ, Chineke mechiri ọnụ ụzọ ụgbọ ahụ y Iju Mmiri ahụ malitere.
Ma ndi biara, nwoke na nwayi sitere n'anu-aru nile, we bia, dika Chineke nyere iwu; Jehova we mechie uzọ.
Mgbe mmiri mechara dajụọ, Noa meghere windo ụgbọ ahụ ma zipụ ụfọdụ nnụnụ ka ha gaa nyocha. Mgbe ọ hụrụ na m nọ ná nchebe Noa bupụrụ ụlọ ahụ n’ụgbọ ahụ wee pụọ.
Ma o wee ruo na n’ime narị afọ isii na otu nke Noa, n’ọnwa mbụ, n’ụbọchị mbụ nke ọnwa ahụ, mmiri ahụ takọrọ n’elu ụwa; Noa we wezuga ihe-nkpuchi n'ub͕ọ ahu, le, ma, le, iru ala kpọrọ nku.
N’ọnwa nke abụọ, n’abalị iri abụọ na asaa n’ọnwa ahụ, ụwa kpọrọ nkụ.
Chineke gwaziri Noa okwu, sị:
Si n'ụgbọ ahụ pụta, gị na nwunye gị na ụmụ gị na ndị nwunye ụmụ gị.
Jenesis 8: 13-16
Ebee ka ụgbọ ahụ dị taa?
Ọ dịghị onye ma ebe ụgbọ Noa dị ma ọ bụ na ọ ka dị. Baịbụl kwuru na ụgbọ ahụ rutere n'ugwu Ararat. E nwere mkpọmkpọ okwu a na-akpọ Ararat na Turkey, ma ọ bụ ugwu mgbawa na-arụ ọrụ, ọ dịghịkwa onye ahụla ihe àmà nke ụgbọ ahụ ruo taa. Ụgbọ ahụ gaara esi n'ugwu a ma ọ bụ n'ugwu ọzọ dị n'ógbè ahụ.
Ubọ ahu we kwusi n'ọnwa nke-asa, n'ubọchi nke-iri-na-asa nke ọnwa ahu, n'elu ugwu Ararat.
Iju Mmiri ahụ mere ihe dị ka afọ 5.000 gara aga dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo. Dị ka e ji osisi rụọ ụgbọ ahụ, nke na-emebi emebi, ọ bụ O yighị ka a ga-amata akara ya taa.
Anyị na -atụ anya na ị ghọtara ugbu a kedu ka ụgbọ ahụ si dị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu na-amụta akụkọ sitere na Akwụkwọ Nsọ, anyị na-agba gị ume ka ị gaa n'ihu na-eme nchọgharị Discover.online wee gụọ akụkọ anyị gbasara ya. gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt.